'AyinguBrexit endimvoteleyo': I-Brexiteer whines malunga nelayini yokundwendwela ye-EU ende
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » 'AyinguBrexit endimvoteleyo': I-Brexiteer whines malunga nelayini yokundwendwela ye-EU ende
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
umfanekiso ngoncedo lwe-wikipedia
Isikhalazo saseBritane uBrexiteer senze ukuba kubekho ukugculelwa kwimithombo yeendaba ezivela kwi-EU Remainers, emva kokukhalaza ukuba kufuneka alinde kumgca wokulawula ipasipoti phantse iyure eAmsterdam. Isikhululo senqwelomoya iSchiphol.
Le ayisiyiyo Brexit Ndivotele, ”wakhala uColin Browning, ozichaza njengomnye wabantu abazizigidi ezili-17.4 abavotele uBrexit, uvakalise 'ingqumbo' yakhe kwi-tweet ngoLwesine, kunye nomfanekiso kwisikhululo seenqwelomoya saseDatshi, ngelixa elinde ipasi lakhe itshekishiwe.
U-Browning wathumela umyalezo ku-titter: “Iyanyanyeka inkonzo e-Schiphol. Imizuzu engama-55 simile kulayini wokungena. Le ayisiyiyo iBrexit endiyivoteleyo. ”
Isimanga sempendulo kaBrexite ecaphukisayo kwingxaki yakhe kwisikhululo senqwelomoya sase-EU khange siphulukane nabahlali abaninzi kwimithombo yeendaba. Omnye umntu uxelele uBrowning ukuba "uyifumene into oyivoteleyo," ngaphambi kokudlalisa ngelithi: "Yonwabele!" Yabonisa impendulo enomsindo evela kuBrowning owayenyanzelisa ukuba "akazange avote ame kulayini ngaphezulu kweyure kutheni [sic] abanye abasebenzi bejonga iipasipoti zethu."
I-Brexiteer yahluthwa nge-avalanche ye-gifs evela kwabo babonakala bevuyela ukukhathazeka kwakhe kwilizwe lase-Brexit alivoteleyo. Kwakukho ukumbiwa okukhohlakeleyo njenge- "Project soyika strikes again eh?" Kwaye “Yifunxe ibhotolo.”
Nangona i-UK ingene kwixesha lotshintsho ukushiya i-bloc ngoJanuwari 31, ezinye izikhululo zeenqwelomoya sele zingenisile iinkqubo ezintsha zokuphatha abemi base-Bhritane njenge-non-EU. Oku kunokuthetha ukuba iBrits kufuneka isebenzise imizila eyahlukeneyo kwaye ixhomekeke kwimibuzo emininzi kulawulo lwemida.